Tag: ngwa mkpanaka nke ekwentị | Martech Zone
Tag: ngwa nke ekwentị na - ejikọ aka
Leanplum: A / B Nwalee ọdịnaya ekwentị na Izi ozi gị
Tọzdee, Septemba 25, 2014 Wednesday, September 24, 2014 Douglas Karr
Zụlite na itinye ngwa mkpanaaka nwere ike ịbụ usoro na-agwụ ike, na-ewe akụ ma na-akụda mmụọ maka ụlọ ọrụ. Naanị ịnweta ihu ọma site na Storelọ Ahịa canlọ Ahịa nwere ike ịbụ enyemaka mgbe ụfọdụ, echefula na ị nwere ike iji ngwa mkpanaka gị rụọ ọrụ. Ọ bụrụ n’ịchọta na ohere dịịrị iji melite ma ọ bụ hazie ngwa ahụ, ọ pụtara mmepe ọzọ na nhapụ ọhụrụ. Enwere uzo ndi ozo di. Leanplum bụ azịza zuru oke nke njikarịcha maka ngwa mkpanaka iji nyere aka